Alohan'ny handefasanao - AfricaArXiv
Fampahalalana ankapobeny alohan'ny handefasana
Fa maninona no tokony hizara ny valin'ny fikarohana nataonao amin'ny tahiry fametrahana?
Sora-baventy efa vita an-tsoratra natolotry ny tahiry fitehirizam-bokin'i AfricaArxiv fanaparitahana maimaimpoana sy haingana ary fifanakalozan-kevitra eran-tany ny famoahana fikarohana alohan'ny famoahana an-tsoratra amin'ny diarin'ny fandinihan-tena.
Ireo lahatsoratra navoaka rehetra dia homena a CC BY 4.0 fahazoan-dàlana ary ny DOI (mpanondro zavatra nomerika) ary koa hambara amin'ny Google Scholar. Rehefa mampiasa azy ireo izy ireo, ary indrindra rehefa miteny, dia tokony ho marihina mazava tsara ny toe-javatra efa miomana.
Aza hadino fa: AfricaArXiv tsy diary iray ary tsy manombatombana ny kalitaon'ny siantifika amin'ny antsipiriany rehetra. Raha vao misy fandikan-teny iray mandalo fanodinana ary havoaka izany, dia maharitra hatrany ilay rafitra. Izahay dia manana ny zo tsy hisintona sora-tanana aorian'ny famoahana boky raha fantatra ny hosoka na fady.
Mamporisika ny fifandraisan'ny vondrom-piarahamonina izahay amin'ny alàlan'ny fanehoan-kevitra sy fizarana ny fanomanana. Read more amin'ny info.africarxiv.org/peer-review.
Hamarino mandritra ny vanim-potoana fanarahan-dalàna sy ny fanararaotana: Ampiasao ny SHERPA / Romeo serivisy hanara-maso ireo politikam-panomanana amin'ny fanaovan-gazety ho an'ny antsipirihany bebe kokoa momba ny safidy fizahan-tena ho an'ny diarinao izay mikasa ny hamoaka ny lahatsoratrao.
Ny mpahay siansa afrikana mifototra amin'ny kaontinanta afrikanina
Ny mpahay siansa afrikanina izay mipetraka ao amin'ny andrim-panjakana mpampiantrano ivelan'ny Afrika
tsy siantifika afrikana manao tatitra momba ny fikarohana natao tany amin'ny faritany afrikana; aleo miaraka amin'ireo mpanoratra Afrikana miaraka amin'ny lisitra
tsy siantifika afrikana manao tatitra momba ny fikarohana mifandraika amin'ny raharaha afrikanina
Manaiky ireto karazana sora-tanana manaraka ireto izahay - fiomanana na lahatsoratra
Avereno jerena ireo taratasy
valiny 'ratsy' sy valiny 'null' (izany hoe valiny tsy mahazaka hypotesa)
Data sy fomba taratasy
Taratasy famaritana Dat Dat
Ireo teny voalaza etsy ambony
Ny karazana format hafa dia hodinihina rehefa averina.
Manampia rakitra sy angona fanampiny
Azonao atao ny manampy sy mampifandray amin'ireo rakitra fanampiny amin'ny endriny rehetra miaraka amin'ny tahiry tsy voafetra.
Lahatsoratra navoakan'ny fikarohana
Raha te hizara sora-tanana izay efa navoaka ho lahatsoratra an-gazety ianao dia mandehana panomax.ru ary apetaho ao amin'ny sarontava fikarohana ilay lahatsoratra; jereo raha misy 'toy ny preprint' miakatra amin'ireo endrika famoahana ekena.
Ny ankamaroan'ny diary akademika dia manaiky ny fanamboarana fitaovam-panomanana, fa tsy ny sasany kosa. Raha te hahalala bebe kokoa momba ny Database database Sherpa / RoMEO.
Amboary ny soratanao
Ampidiro ny rakitsoratra ho rakitra PDF.
Raha mila fanampiana amin'ny famolavolana endrika ianao dia azonao atao ny mampiasa an'ity modely sora-tanana manaraka ity izay natambatry ny ekipa mpanelanelana amin'ny fandefasana AfrikaArXiv.
Ampio tsipika iray eo amin'ny pejy eo aloha "Ity dia fampahalalana izay natolotra tao amin'ny diarin'ny XXX" raha azo ampiharina. Vantany vao eken'ny gazety fanaovan-gazety voarakitry ny lahatsoratra ianao dia azonao atao ny manavao ny fampitaovana amin'ny pejin-kafatra na mpanoratra sora-tanana nekena ary manova an'ity andininy ity amin'ny "Ity dia lahatsoratra izay efa nijerena akaiky ary ekena tao amin'ny diary XXX."
Azafady mba hajao ny fanajana ny zon'ny mpamorona sy ny fahazoan-dàlana azo ampiharina amin'ny rakitra nosokafanao. Ho an'ny sora-tanana manam-pahaizana dia ny fahazoan-dàlana indrindra no be mpampiasa CC-BY-SA 4.0.
Tohizo ny fandefasanao ny fiomanana
Ankehitriny efa namaky ny fampahalalana ilaina rehetra azonao atao ny mampitahao sy misafidy eo anelanelan'ny sehatra mpiara-miasa aminay handefasana ny sora-tanana efa nomaninao:
Izahay dia mikasa ny hanangana trano famatsiam-bola vita afrikanina ao Afrika ary noho izany dia manantona sy miresaka amin'ny fikambanana sy mpiara-miasa maro hafa. Mandritra izany fotoana izany, miara-miasa amin'ireo mpamatsy serivisy fanomanana efa vita toy ny eto ambany izahay.